Asongadino ny singa iray amin'ny sisa amin'ny sary | Famoronana an-tserasera
Indraindray isika mahita sary ary mieritreritra hoe hanao ahoana izany raha manasongadina ampahany na singa iray fotsiny isika.
Amin'ity lesona ity dia hampianarinay ianao manasongadina zavatra iray, na fizarana iray, na amin'ny fanomezana azy famirapiratana bebe kokoa, loko bebe kokoa, na vokatra hafa tiantsika ary heverinay fa mety amin'ny mahazoa ny valiny tadiavinay.
Manomboka amin'ny fisafidianana, ao anatin'ny sary, ilay singa na fizarana tianay indrindra.
Nampiasainay ny fisafidianana polygonal, satria amin'ity tranga ity dia tsy afaka misafidy voafaritra mazava isika raha manapa-kevitra ny hampiasa ny tongony majika. Saingy araka ny hitanao, amin'ny faharetana ary amin'ny antsipiriany kely dia azonao atao.
Satria maranitra ny sisin'ny fisafidianana ary indraindray tsy mivadika araka ny nantenaina izany dia hampianatra anao tetika haingana izahay farito tsara kokoa ireo sisiny ireo. Amin'ny maha-fitaovana fifantina io dia ho hitantsika eo amin'ny bara ambony ny safidy antsoina Manatsara sisiny, tsindrio eo ary hiseho ny varavarankely pop-up miaraka amin'ireto safidy manaraka ireto:
El radio dia mahita ny sisiny ary faritana kely kokoa.
El Voalaminay mampihena ny sisiny mahitsy miolaka.
Calar dia midika hoe manjavozavo ny fifantenana, mba tsy hisy sary nohetezana maranitra toy izany.
El mifanohitra hanao ny mifanohitra amin'ny drafitra.
Fiovan'ny sisiny ataovy ny fisafidianana kely kokoa na lehibe kokoa.
Aorian'ny nahavitanay ireo safidy tsara indrindra ireo dia manindry isika manaiky ary ho hitantsika ny valin'ity fifantenana ity. Ny zavatra arosonay etsy ambany dia alaharo ity sary ity voafantina ho fisorohana hanao zavatra tsy tiantsika ary tsy maintsy mifidy indray. Afaka mandefa ny kiheba isika raha te hanana duplicate Layer - Layer duplicate, na ataontsika fotsiny Ctrl + J.
Raha vantany vao vita izany dia izay sisa tavela dia omeo ny vokadiny izay tianay indrindra, ary amin'izay dia afaka manasongadina ny singa izay averina. Amin'ity tranga ity dia mieritreritra isika esory ny loko rehetra avy any aoriana, mamela ireo frezy voafantina ihany no miloko. Ho an'ity dia nandeha tany izahay Fanitsiana-sary-Desaturate:
Azonao atao ny mampiasa hevitra hafa, toy ny fanovana ny loko amin'ny ambiny, fanaovana izay tsy hanazavana azy, ankoatry ny hafa. Na eo aza izany dia hanova ny fanaingoana ny sary fototra isika, ary manasongadina ny entana izay notadiavinay.
Aza adino ny mitsidika ireo tutorial misy antsika hafa miaraka amin'ny tetika hafa mba ho manam-pahaizana amin'ny fanovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Asongadino ny singa iray amin'ny sary sisa